ကျူးကျော်များကို တွံတေးမြို့နယ်ရှိ မြေဧက ၅ဝဝ ပေါ်၌ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများ တည်ဆောက်၍ နေရာ ချထားပေးရန် စီစဉ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ကျူးကျော်များကို တွံတေးမြို့နယ်ရှိ မြေဧက ၅ဝဝ ပေါ်၌ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများ တည်ဆောက်ပေး၍ ပြန်လည်နေရာ ချထားပေးရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ပန်းချီဆရာနေဇော်၏ တစ်ကိုယ်တော် ပန်းချီပြပွဲ ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပမည်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ အထင်ကရနေရာများကို ရေးဆွဲထားသော ပန်းချီဆရာနေဇော်၏ ပန်းချီကားများ စုပေါင်းပြသမည့် ပန်းချီပြပွဲကို အောက်တိုဘာ ၁၄ရက်မှ ၁၆ ရက်အထိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၄၃ လမ်း အလယ်ဘလောက်ရှိ 43Art Gallery ၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ပန်းချီဆရာနေဇော်ထံမှ သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာမှ နားလည်မှု လွဲမှားကာ ဝေဖန်နေသည့်ကိစ္စများ ဆွေးနွေး
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးအား ဂျပန်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီးH.E. Mr. Tateshi Higuchi နှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Andrew Patrick တို့က ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး မေခလာခန်းမ၌ သီးခြားစီ လာရောက်တွေ့ဆုံသည်။
စစ်တွေမြို့နယ်၊ အုန်းတောကြီးမြောက်(ဘင်္ဂါလီ) ဒုက္ခသည် စခန်း၌ နေထိုင်သူတစ်ဦးထံမှ မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိ
Page 2041 of 2172